NOHO NY FITIAVAN-TENA : Miantso fanonganam-panjakana ny Seces -
AccueilSongandinaNOHO NY FITIAVAN-TENA : Miantso fanonganam-panjakana ny Seces
Mivily any amin’ny tsy tokony ho izy intsony ny fitakiana ataon’ireo mpikambana ao anatin’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra sampana Antananarivo (SECES Antananarivo). Tsy nijanona tamin’ny fitakiana tombontsoa manokana intsony mantsy izany fa lasa tonga hatrany amin’ny fiantsoana fanonganam-panjakana raha ny fanambarana nataon’ity sendika ity tamin’ny herinandro. Nanao pi-maso tamin’ny tafika handray ny andraikiny manoloana ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana izao ny Seces Antananarivo araka io fanambarana nataon’izy ireo io. Feno fanaratsiana sy fandranitana ny tompon’andraki-panjakana ankehitriny ankoatra izay ny votoatin’ny fanambarana nataon’izy ireo. Toa mainty avokoa ny zava-bitan’ny mpitondra ankehitriny fa manana paikady madio tsisy pentina kosa izy ireo. Tsy fantatra intsony ihany koa na ireo mpitarika sasany miketrika toerana politika no manao ireny fanambarana ireny, dia nolazaina fa tamin’ny anaran’ireo mpikambana SECES rehetra eto Antananarivo.
Toa tsy tsapan’ny SECES Antananarivo fa anisan’ny tompon’andraikitra, satria anton’ny nahatonga ny firenena latsaka anaty fantrana lalina amin’izao fotoana izao izy ireo. Izy ireo mantsy no anisan’ny mamolavola ny taranaka malagasy ho tompon’andraikitra eto amin’ny firenena hatramin’izay ka hatramin’izao, tsy fantatra anefa ny antony fa mbola tsy tena hita nisongadina hoe tafita tany amin’ireny mpianatra nobeaziny ireny lesona tsara tokony hampandrosoana ny firenena. Firifiry ihany koa moa ireo mpianatra eny amin’ny anjerimanontolo no mitaraina fa ataon’ireto mpikambana ao amin’ny SECES ireto sorona amin’ny fitakiana tombontsoa ny fianaran’izy ireo? Mbola tsy hita nisongadina tamin’ny fampandrosoana ny firenena ankoatra izay ny voka-pikarohana nataon’izy ireo, nefa dia hitakiana tambiny mihoa-pampana amin’ny mpitondra nifandimby.
Raha ny tokony ho izy dia ny fikarohana izay hahatsara ny seha-pampianarana eny anivon’ireny anjerimanontolo ireny no himasoan’ny SECES. Hamolavola paikadim-pampianarana vaovao mba hisy fiantraikany amin’ny fampandrosoana ny firenena tokoa ireny voka-pikarohana ireny. Ny mifanohitra amin’izany anefa no ataon’ireto vato nasondrotry ny tany ireto noho ny fitadiavan-tseza sy ny fanaovana halako bika tsy tiko tarehy. Misy amin’ireo mpianatra aza no milaza fa minia manakorontana ny fampianarana eny amin’ny Anjerimanontolo mihitsy ireto sendikan’ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ireto. Tsy vitan’izay efa manakorontana ny fampianarana, fa mikendry ny hanakorontana ny firenena ihany koa noho ny fitiavan-tena sy tombontsoa mihoa-pampana.
Madagasikara : Vonona hiady amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro
Araka ny efa fantatra, dia notanterahina tany Paris, Frantsa, ny fihaonambe « One Planet 2017 », izay mikasika sy mahakasika indrindra ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetr’andro. Anisan’ireo firenena nandray anjara tamin’izany i Madagasikara ...Tohiny